माघे संक्रान्ति मेला लाग्ने ढुंगेसाँघुको सरकारी जग्गा रहस्यमय ढंगबाट व्यक्तिको नाममा वेचविखन – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ फाल्गुन २, शुक्रबार) ०७:५७
सरकारी जग्गा हिनामिनाको घटना अहिले पोखरामा पनि देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ स्थित ढुंगेसाँघुमा रहेको सरकारी (पर्ति) जग्गा रहस्यमय ढंगबाट व्यक्तिको नाममा वेचविखन गरिएको पुष्टि हुन आएको छ । सो जग्गामा हरेक वर्ष माघे संक्रान्ति मेला लाग्ने गर्छ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ मा रहेको ओम सदाशिव सिद्देश्वर हरिहर मन्दिरले चर्चेको कि.नं. १६३३ नम्वरको जग्गा १५६–३–३–३ मध्य झण्डै ३७ रोपनी जग्गा टाठावाठाहरुले व्यक्तिको नाममा ल्याई वेचविखन गरेको पाइएको छ ।
फिल्ड वुकमा पर्ति (सरकारी) उल्लेख गरिएको उक्त कि.नं. १६३३ को जग्गा मिति २०३७÷११÷२ गते कित्ताफोड गरी कि.नं. २५१९ र २५२० गराई २५१९ को ३६ रोपनी १४ आना जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ ।
मिति २०३७ फागुन २ गते मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कास्कीको मिलेमतोमा मकर सक्रान्ती मनाउने हरिहर मन्दिर चर्चेको सरकारी पर्ति जग्गा १५६–३–३–३ क्षेत्रफल मध्यको समथर राम्रो जग्गा कित्ता फोड गरी कि.नं. २५१९ को ३६ रोपनी १४ आना जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा पास भएको र उक्त जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटका भतिजा खड्कबहादुर रानाभाट अध्यक्ष रहेको नौलो घुम्ती नेपाल नामक संस्थाले समेत कि.नं. ३८९६को एक रोपनी जग्गा खरिद गरेको खुल्न आएको छ । २०३६ साल मंसिर २९ गते सन्तोष केसीको नामबाट नौलो घुम्ती नामक संस्थामा उक्त जग्गा नामसारी भई आएको देखिन्छ ।
सरकारले सरकारी, सार्र्वजनिक र गुठि जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचवुझ आयोग २०७६ गठन गरेसँगै तयार पारेको प्रतिवेदनले उक्त जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको पुष्टि भएको हो । नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले २०७६ जेष्ठ ६ गते मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मन्त्री परिषद्ले २०७६÷१०÷६ गते कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे वमोजिम विभागिय मन्त्रालय हुँदै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग ववरमहलको च.नं. १५७९ मिति २०७६÷१०÷१९ को पत्र सहित देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिएको थियो । यसै शिलशिलामा कास्की मालपोत कार्यालयलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरियो ।
सोही वमोजिम कास्की मालेपोत कार्यालयले १६३३ नम्वर कित्ताबाट फोड भई कायम भएको २५२० र २५१९ मध्य घोटाला भएको २५१९ कित्ता र सो कित्ताबाट फोड भई विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नाममा विभिन्न कित्ता नम्वर बनाई सुक्रि विक्री गरिएका जग्गाहरु विक्री वदर गरी कि.नं. २५१९ मै फिर्ता गर्ने कार्य आरम्भ दु्रत गतिमा अगाडि बढेको मालपोत कास्कीले बताएको छ ।
२५२० को कित्तामा रहेको जग्गा ११९–५–२–३ मध्य १३ रोपनी जग्गा पोखरा वृद्धाश्रमलाई भोगाधिकार दिइएको थियो । उक्त भोगधिकार पनि २०७४ मा समाप्त भइसकेको छ । भोगाधिकारको म्याद थप नभए संस्था नविकरणमा समस्या पर्ने छ भने छानविन आयोगको आधिवेहरीले वृद्धाश्रमको जग्गा पनि सरकारी स्वामित्व मै फर्कन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
यता, सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण भएको बारे भट्टराई आयोगले गंभिर ढंगले छानविन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ । सरकारी सार्वजनिक र गुठि जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचवुझ आयोगले कानुन विपरित हुने गरी जुनसुकै प्रकृयावाट किर्ते जालसाँज गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी भई गएका सबै जग्गाको दर्ता वदर गरी सरकारकै नाममा फर्काउने प्रतिवेदनको मुख्य मक्सद रहेको छ ।
आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई विभागिय भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रीबाट मन्त्री परिषद्मा पेश गरी निर्णय भएको छ । सरकारी सार्वजनिक र गुठिका जग्गा किर्ते गरी हडपेर राजिनामा पास लिने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाका साथै मिलेमतो गरी किर्ते कागज सदर गरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठिको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कर्मचारी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन वमोजिम सरकाले कारवाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ भने मालपोत कार्यालय कास्कीले जग्गा विक्री वदर कार्य अगाडि वढाइसकेको छ । २५१९ नम्वर कित्ता भित्रका विभिन्न कित्ता पहिचान गरी रोक्का गरिसकेको जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गा काण्डमा संलग्न उपर वृहत् छानविन गर्ने भएको छ । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्तै गरी यसमा पनि उथल पुथल आउन सक्ने देखिएको छ । २०३७ साल फागुनमा मालपोत र नापीका प्रमुख समेत यस प्रकरणमा फस्ने निश्चित रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा झै यसमा पनि स्वेच्छाले जग्गा फिर्ता गर्ने वा मुद्दा खेप्ने भन्ने बारेमा के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न । यद्दपि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा सुनिल पौडेलले झै जग्गा फिर्ता गरे उन्मुक्ति पाउने कि नपाउने ? त्यो भने समयले नै बताउला ।
गुठिको जग्गा पास गर्ने क्षेत्रबहादुर रानाभाटका छोरा खड्गबहादुर रानाभाट अहिले नौलो घुम्ती नेपालका अध्यक्ष रहेका छन् । सामुदायिक विकास संस्थाको रुपमा सञ्चालित संस्था नौलो घुम्ती नेपालले लिएको एक रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर सरकारको निर्णय वमोजिम फिर्ता गर्लान् त ? अध्यक्ष खड्गबहादुर रानाभाटसँग प्रतिकृया लिन उनको मोवाइलमा फोन गर्दा स्वीच अफ रहेको थियो । युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा पत्रकार यदुनाथ बन्जाराले समाचार लेखेका छन् ।
के छ प्रतिबेदनमा ?
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार साविक छिनेडाँडा गाविस–६ महतगौंडा (ढुंगेसाँघु सीतापाइला) मा रहेको ओम सदा शिवजी सिद्धेश्वर हरिहर मन्दिर वरपर सार्वजनिक जग्गा थियो । २०३२ सालमा नापी हुँदा कित्ता नम्बर १६३३ मा १५६ रोपनी ३ आना ३ पैसा ३ दाम पर्ती (सरकारी) जग्गा रहेको फिल्डबुकमा कायम थियो । ०३७ फागुन २ मा उक्त जग्गा कित्ताकाट भयो । क्षेत्रबहादुर रानाभाटले कित्ता नम्बर २५१९ को ३६ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए । सरकारका नाममा रहेको कित्ता नम्बर २५२० को ११९ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाममध्ये १३ रोपनी जग्गा पोखरा वृद्धाश्रमलाई भोगाधिकारका लागि दिइयो । बाँकी जग्गामा ढुंगेसाँघु मेला लाग्ने भयो ।
अहिले क्षेत्रबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता हुँदाको निर्णय मिसिल (फाइल) नै मालपोत कार्यालयबाट गायब छ । क्षेत्रबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने र जग्गा दर्ता मोठ स्रेस्तामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीका नामसमेत यकिन हुन सकेको छैन । मालपोत कार्यालयले गत असोज १ मा जाँचबुझ आयोगलाई उक्त व्यहोरोको जवाफ पठाएको छ ।
आयोगले छानबिनका क्रममा फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भए पनि कानुनबमोजिम स्रेस्तालगायत अभिलेख तामेली फाँटको डायरी अभिलेखमा नभेटिएको जनाएको छ । मिसिल नम्बरसमेत उल्लेख नभएको अवस्थामा क्षेत्रबहादुरका नाममा दर्ता भएको भनिएको मिसिल कानुनी रूपमा अस्तित्वमा नरहेको देखिन आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अवस्थामा त्यस्तो जग्गा दर्ता दूषित प्रकृतिको रहेको भन्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ ।
हाल उक्त जग्गा प्लटिङ गरी २८ कित्तामा बाँडिइसकेका छन् । ती जग्गा पटक–पटक किनबेच भइसकेका छन् । १९ कित्ताको हाल साविक (नयाँ नापी) भएका छन् । पाँचवटा पक्की घर छन् । नौलो घुम्ती नेपाल नामक लागूऔषध दुर्व्यसनी पुनःस्थापना गर्ने संस्थासमेत उक्त जग्गामा रहेको छ । संस्थाले १० वर्षअघि करिब ४५ लाख रुपैयाँमा साढे ३ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । क्षेत्रबहादुरले आफू जीवितै छँदा केही जग्गा बिक्री गरेका थिए । केही जग्गा हक हस्तान्तरण गरी छोराहरूलाई दिए । जग्गा कित्ताकाट गरी कुनै कित्ता ७ पल्टसम्म किनबेच भएको पाइएको छ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिका नामबाट जग्गा बदर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले माघ १९ मा मालपोत कार्यालय कास्कीलाई पत्र लेखी निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले कास्कीसहित बाँके, मकवानपुर, रौतहट र भोजपुरमा रहेका जग्गासमेत सरकारका नाममा ल्याउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकमा दिपक परियारले लेखेको समाचार अनुसार, जाँचबुझ आयोगको सिफारिसबमोजिम व्यक्ति विशेषका नाममा सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्ता स्वतः बदर भएर सरकारी कायम हुनेछ । क्षेत्रबहादुरका नाममा स्रेस्ता कायम हुन नसक्ने देखिएकाले अधिकारप्राप्त निकायबाट थप अनुसन्धान भई स्रेस्ता सच्चिने भएको छ । जग्गा दर्ताका क्रममा दोषी देखिनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय हुनेछ ।
(२०७६ फाल्गुन २, शुक्रबार) ०७:५७ मा प्रकाशित